10 free music playlist saịtị
E nwere ụfọdụ weebụsaịtị na-enye ọkaibe ọrụ mgbe ọ na-abịa na-eke ma ijikwa music ọdịnaya online. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa iji jide n'aka na ihe kwesịrị ekwesị ojiji nke website na-etinyere na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na nke a nkuzi e dere eburu n'uche top 10 weebụsaịtị na ike ga-eji maka nzube. The nkowa na akwụkwọ screenshots nakwa na e kwukwara ime ka isiokwu mfe n'ihi na onye ọrụ.
2. Fav Mezie
8. Mama igwe
10. Ghaat Udidi
Download free music ma na-eso music playlist na TunesGo
Achoghidi iwebata dị ka ọ na esesịn e weere dị ka otu nke kasị mma weebụsaịtị. Ọ bụghị nanị na-enye music na-ege ntị ọrụ kamakwa ana achi achi na onye ọrụ nwere ike ịzọpụta ma dezie music mkpado online otú na n'ọdịnihu mgbe website a gara mgbe ahụ onye ọrụ nwere ike ịhụ ọdịnaya na otu ebe. The URL bụ www.slacker.com na ọ na-eduga ná homepage nke website
Onye ọrụ nwekwara ike iri uru nke ugbua kere listi ọkpụkpọ ma ọ bụ nwere ike ịmepụta otu site na itinye song ma ọ bụ na-ese aha:
Nke a website bụ otu n'ime saịtị na nye ọrụ na egwu n'ụzọ. Iji jide n'aka na ihe kasị mma na-eme na nke a onye ọrụ dị nnọọ mkpa ileta URL nke website
Onye ọrụ ahụ kwesịrị ịbanye Keywords n'ime search mmanya ịchọ n'elu 100 songs na-depụtara site ndabere:
The mkpa playlist nwere ike mgbe ahụ ga-kere mfe:
Ọ bụ otu n'ime ndị na weebụsaịtị www.Blip.fm na-enye ọrụ ke mfe kwere omume n'ụzọ na maka otu ihe ahụ ha na-mara maka ọdịnaya management nakwa na a nke ọma kọwaa n'ụzọ. Ọ na-na-kwuru na saịtị jide n'aka na playlist na-kere dabeere na nchọgharị na ọnọdụ na ịdị na na ndị enyi. E nweghị nhọrọ nke na-eke listi ọkpụkpọ aka:
The onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na URL nke website odụk ka adreesị mmanya mere na n'ụlọ peeji-egosi:
Ugbu a onye ọrụ nanị kwesịrị pịa ike playlist nhọrọ iji jide n'aka na usoro amalite na a ọma kọwaa n'ụzọ:
All kpaliri bụ ka soro iji jide n'aka na usoro ọganihu na onye ọrụ na-playlist n'ime sekọnd. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na-eme n'aka na playlist na-kere na-egwu n'ụzọ ọ na-gwara iji jide n'aka na ntuziaka na-dere ka anya dị ka ike playlist a pịrị ga-agbasoriri kpamkpam. Ke akpatre nzọụkwụ onye ọrụ dị nnọọ mkpa ka nbanye na chọrọ Ama mgbachapụ ahụmahụ:
The URL nke website ka ịnweta homepage bụ http://www.playlist.com/ na okirikiri nhọrọ ukwuu bụ jụụ mfe maka ọrụ nke nile di iche iche:
Ozugbo onye ọrụ abatakwa genre ma ọ bụ na-ese aha aro gbapụta na-akpaghị aka:
Ka anya dị ka ndị chọrọ oke a pịrị na playlist ga-kere na-akpaghị aka na ga-ịmalite ịkpọ egwu n'otu ntabi:
Onye ọrụ ga nwere ịbanye ma ọ bụ debanyere jide n'aka na playlist na-abụghị nanị gbanwere ma ọdịnaya dị ka kwa chọrọ na ọchịchọ nke onye ọrụ na-kwukwara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
The website nwere a dị mfe okirikiri nhọrọ ukwuu na ike ga-gara na http://www.npr.org/music/?refresh=true na e kere eke nke playlist nwekwara adịghị a siri ike ọrụ mgbe niile. The homepage bụ na-enweta nke bụ ka ndị a:
The playlist button a na-ahụ na-pịrị n'ihu n'ihu:
N'ime ọzọ window onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na taabụ nke nbanye ma ọ bụ aha a pịrị iji jide n'aka na playlist a gbanwere na ọhụrụ tracks na-kwukwara enweghị ihe ọ bụla nsogbu. N'ihi na ọtụtụ nke weebụsaịtị ọ dị ezigbo mkpa iji jide n'aka na akaụntụ na-kere na-enweghị nke playlist e kere eke bụ ekwe omume na niile:
The URL nke website bụ http://www.daytrotter.com/#!/ ha na-ekwu na website bụ olu nke abụrụ ụdị na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na okirikiri nhọrọ ukwuu nke website bụ nnọọ mma:
The onye ọrụ nwere na-eme ka n'aka na Keywords na-banye search mmanya na-arụpụta gbapụta. The playlist taabụ na-ahụ na-pịrị iji jide n'aka na ama kere listi ọkpụkpọ gbagote. Iji ike a ọhụrụ playlist ma ọ bụ na-eme ka n'aka na ọdịnaya na-ehichapụ si ẹdude ndị onye ọrụ nwere ịbanye na gaba:
Ọ bụ a na saịtị na ike ga-ewere dị ka mmakọ nke Pandora na Last.fm dị ka ọ nwere atụmatụ nke ma ndị a. The URL ga-enweta bụ http://hypem.com/popular n'ihu n'ihu:
Onye ọrụ ahụ nwere iji search mmanya na-egwu ma ọ bụ onye na-ese playlist. Ịgbanwe ọdịnaya ọzọ nke onye ọrụ nwere ịbanye na jide n'aka na needful na-eme. Na-enweghị ihe ịrịba ama na ọrụ nwere ike dị nnọọ ntị playlist na-enweghị ike ịgbanwe ya mgbe niile:
Ọ bụ a website nke na-achoghidi Intro mgbe niile. Www.Soundcloud.com .Onye kacha ụzọ inweta atụmatụ nke playlist bụ iji jide n'aka na ha na-ebudatara ma gee ntị na offline mode mere na onye ọrụ mgbe nwere na-aga mgbe ndị internet na-ege ntị online music. The nzọụkwụ na-n'okpuru:
Ihe omume na na isi mmalite ịma ngalaba bụ na-ebudatara:
The exe bụ mgbe ahụ ka na-agba ọsọ, mgbe ahụ, ọhụrụ window ga-ahụ gbapụta:
The wordpress ngwá ọrụ igbe ga-egosi na URL nke ngwá ọrụ a na-arịọ maka:
The API isi a na-ahụ mkpa na nke a:
The download ọnọdụ a na-na-kpọmkwem na nke a:
The mekọrịta button a na-ahụ na-enwe:
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla njehie na-okosobode mgbe ahụ ngwá ọrụ bụ na-agba ọsọ ọzọ.
10. baraaka Udidi
Ọ bụkwa otu n'ime ndị weebụsaịtị nke na-n'aka na nsonaazụ kacha mma na-enwetara na nke a. The URL a ga-agbaso bụ http://www.stereomood.com/ ka ịnweta homepage (n'aka ekpe foto):
The ọnọdụ dabeere search ga-playlist. Dị nnọọ pịnyere mkpa Keywords n'ime search mmanya (Right foto):
The yiri listi ọkpụkpọ ga-gbapụta mfe na maka otu ihe ahụ ọ na-gwara iji jide n'aka na nbanye na saịtị a rụrụ ịgbanwe ọdịnaya na ala na afọ ojuju:
Wondershare TunesGo - Nyefee na jikwaa gị data gị iOS Ngwaọrụ
Google Chrome Soundcloud Downloader na Ya Best Alternative
20 Free Music Download égwu
Apple Music ememme (iTunes Music ememme) London 2015
Download Music MP3? Ụfọdụ Atụmatụ na unu amaghị
Top 5 music lyrics search engine
Top 50 Easy Piano mpempe akwụkwọ, n'ihi na Begginer Piano mpempe akwụkwọ music
> Resource> Music> 10 Free Music Playlist Sites